सन्तोष न्यौपाने « Clickmandu
कस्तो व्यवसायलाई स्टार्टअप भन्ने ? परिभाषानै गर्न सकेन सरकारले
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को बजेटमार्फत् स्टार्टअपहरुलाई सहयोग गर्ने भनेर पहिलो पटक ५० करोड रुपैयाँको फन्ड बनायो । फन्डको उद्देश्य थियो, स्टार्टअप सञ्चालन गर्न चाहने उद्यमीलाई बिऊ पुँजी
काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको ठूलो मात्राको डिजेल र ग्यासको प्रयोगलाई घटाउने उद्देश्यका साथ नवलपरासीमा बायोमास प्लेट उत्पादन शुरु भएको छ । पाँच वर्षदेखि आइटी क्षेत्रमा काम गरिरहेका तीन
करेन्ट चाउचाउले बढायो खुर्सानीको माग, लाखौं क्विन्टल खुर्सानीका लागि सामूहिक खेती गर्दै किसान
काठमाडौं । मुलुकमा उद्योग सञ्चालन हुने हो भने त्यसले अन्य धेरै उत्पादन वृद्धि गर्छ । यसका पछिल्लो राम्रो उदाहरण बनेको करेन्ट चाउचाउ । बुटबलमा रहेको यशोदा फुड्सले उत्पादन गरेको पिरो
काठमाडौं । दुई वर्षअघि कोरियन रामेन चाउचाउ बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखियो । एकै प्रकारको चाउचाउ खाइरहेका नेपाली उपभोक्तालाई ‘कोरियन हट स्पाइसी’ रामेनले स्वादै परिवर्तन गरिदियो । ट्वाक्क पिरो स्वाद चाउचाउ पारखीको
सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानः श्रमिक र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध सुधार
काठमाडौं । कुनैबेला औद्योगिक क्षेत्र यस्तो अशान्त थियो, जसले रोजगारदाता र श्रमिक दुबैलाई निराश बनाएको थियो । जहिलेको मजदुर आन्दोलन, बन्द–हड्ताल, तालाबन्दीले कतिपय उद्योग बन्दनै भए । श्रमिक आफैले रोजगारी
सार्कस्तरको साझा डिजिटल करेन्सी बन्न सक्ला त ? ‘गभर्नर ग्रुप’ले शुरु गर्‍यो अध्ययन
काठमाडौं । विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुले आफ्नो डिजिटल करेन्सी निर्माण गर्न लागिरहेको बेला दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको साझा डिजिटल करेन्सी बनाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा अध्ययन शुरु भएको छ । नेपाल राष्ट्र
बैंकहरुको ‘डिजिटल’ होडबाजीले मोबाइल बैंकिङमा छलाङ, ६ वर्षमा ७०० प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । एक दशकअघि एसएमएस बैंकबाट शुरु भएको मोबाइल बैंकिङले अहिले ठूलो फड्को मारिसकेको छ । मोबाइलबाट भुक्तानीसँगै बैंकहरुले आफ्ना विविध सेवालाई हातहातमै पुर्याउन प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । मोबाइल बैंकिङ
नेपाल टेलिकमले पायो फाइभजी परीक्षणको अनुमति, एक वर्ष परीक्षणकाल
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बुहप्रतिक्षित मोबाइल इन्टरनेट फाइभजीको परीक्षण गर्ने अनुमति पाएको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरले नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षण गर्न अनुमति दिएको हो । प्राधिकरणका सहायक
काठमाडौं । ६ वर्षअघि सेवा शुरु भएकाे नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम (नेप्स)ले मुलुकको डिजिटल भुक्तानीमा थुप्रै नयाँ प्रविधि ल्याइसकेको छ । उसले बैंकिङ क्षेत्रका यस्ता प्रविधि ल्याएको छ, जुन विकसित
बेलायत र अष्ट्रेलियाले भिसा नदिएपछि ३४ वर्षे निकेशले शुरु गरेको ‘चिकेन स्टेसन’, ४२ फ्रेन्चाइज
काठमाडौं । निकेशलाई सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ झम्सिखेल हो । उनलाई झम्सिखेल अर्थात् झमेल मन पर्नुमा केही कारण छन् । पहिलो कुरा झम्सिखेलले दिने ‘मिठो बास्ना’ । यो यस्तो ‘फुड हब’
गम्भीर संकटको डिलमा नेपाली अर्थतन्त्रः चीर निन्द्रामा नीति निर्माता, निशानामा राष्ट्र बैंक